Budata The Marble APK maka Android
Budata The Marble
Budata The Marble,
Marble bụ egwuregwu nka nke enwere ike ịkpọ na ekwentị Android na mbadamba.
Onye mere Playmob Apps nke Turkey mebere ya, Marble nwere egwuregwu egwuregwu yiri Agar.io. Ihe mgbaru ọsọ anyị na egwuregwu bụ ime onwe anyị akụkụ kasị ukwuu nke ihe nkesa. Maka nke a, anyị na-eri ọtụtụ bọọlụ edo edo dị ka o kwere mee ma na-eme ka ndị na-emegide anyị obere nsogbu. Ihe kachasị dị ịrịba ama nke mmepụta, ebe anyị nwere ike igwu egwu dị iche iche nala ụkpụrụ na ụdị marble, bụ ihe ịrụ ụka adịghị ya na eserese ya.
Marble bụ otu nime egwuregwu ndị egwuregwu na-agbalị ka ọ bụrụ nke kachasị ukwuu. Maka nke a, anyị kwesịrị ịgụnye bọọlụ edo edo dina nala. Ka anyị na-eji nwayọọ nwayọọ na-eto, anyị nwere ike ịgụnye marble ndị dị ntakịrị karịa anyị. Na nkenke, anyị na-agbalị ime nnukwu bọọlụ marble site na iri bọọlụ edo edo na ndị egwuregwu ndị ọzọ. Ọ bụ otu nime egwuregwu kachasị mma maka ndị egwuregwu na-achọ ihe ọzọ Agar.io ma chọọ inwe oge dị mma na gam akporo.
The Marble Ụdịdị
Mmepụta: Playmob Apps